मलको समस्या सधै उस्तै ! – Krishakkhabar
Sun,26 Jun, 2022
मलको समस्या सधै उस्तै !
Tuesday, June 7th, 2022 | krishak khabar
तनहुँ २४ जेठ
विगत २ । ३ वर्ष यताबाट धान रोप्ने समयमा मलको अभावले सधै सताउने गरेको छ । यस वर्षपनि धान रोप्ने सिजन सुरु हुन लागेपछि मल अभाव हुँदा तनहुँका कृषकलाई चिन्ता बढेको छ ।
मकै गोड्ने बेलादेखि नै मलको अभाव भएपछि समस्या भएको व्यास नगरपालिका–११ पोल्याङका राजेन्द्र पौडेलले गुनासो गरे । “मकै गोड्दा पनि मल चाहिन्थ्यो, त्यो बेला पनि पाइएन, दमौलीमा नपाएपछि डुम्रेमा पुगेर चर्को मूल्यमा खरिद गर्नुप¥यो”, पौडेलले भने, “अब धान रोप्ने बेला आउन लाग्यो, मल चाँही कहिले आउँछ कुन्नि ।”
पौडेलले मकै गोड्ने बेला दमौलीमा मल नपाएपछि डुम्रेमा पुगेर मल खरिद गरेर ल्याएको बताए । “एक हजार पर्ने मललाई डुम्रेमा पुगेर ल्याउँदा तेब्बर तिर्नुप¥यो”, उनले भने, “वर्षेनी मलको अभाव हुन्छ, तर सरकारले कृषकको समस्याप्रति ध्यान दिएको पाइएन ।”
उनले असारको पहिलो साताबाट धान रोप्ने तयारी गरेका छन् । अहिले धानको बीउ राख्ने बेला भएपनि मल नपाउँदा सास्ती भएको उनले बताए । “अहिलेसम्म मल पाउने सुरसार छैन, के गर्ने कसो गर्ने अलमल परेको छु,” उनले थपे ।
मल खरिद गर्न तीन÷चार पटक बजार धाउँदा पनि मल नपाएको भिमादकी देवी खनालले गुनासो गरे । “चाहिएको जति मल कहिल्यै पाइएन” उनले भने, “कृषकको समस्या कहिल्यै समाधान हुने भएन ।”
धान रोप्ने बेला डिएपी र गोड्ने बेला युरिया मल प्रयोग गरिन्छ । वर्षौदेखि रासायनिक मल हालिरहेको खेतबारीमा गोबर मल मात्रैले काम नगर्ने किसान बताउँछन् । शुक्लागण्डकीका केदार पौडेलले गोबर मलले मात्रै नहुने भएकाले रासायनिक मल आवश्यक पर्ने बताए । “तर सधैँ मल अभाव भइरहन्छ, कृषकलाई एकदमै सास्ती छ, मल खोज्दै भौतारिनुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने ।
शुक्लागण्डकीकै सुशन पौडेलले मल अभाव हुँदा कृषि पेशामा जाँगर हराउँदै गएको बताए । “सरकारले किसानको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकेको छैन, रोप्ने बेला मल पाइँदैन,” उनले भने, “कृषिमै केही गरौं भन्यो मलकै अभावले झन् चिन्ता थपिन्छ ।”
स्रोत ः रासस
TOTAL PAGE VIEWS: 1045537